विगतको मेहनत र संघर्षले अधिकृत भए : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरी
२०७७ पुस ४ सुर्खेत । वि.सं २०६५ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका नेत्रराज गिरी एक लोकप्रिय कर्मचारीका रुपमा परिचित छन् । लामो समय देखि विभिन्न पदमा रही काम गरेको वर्षौबर्ष सेवाको अनुभव छ । हाल बराहताल गाउँपालिका सुर्खेतका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन् । उनै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरीसँग,‘उनको बाल्यकाल, जीवन भोगाई संघर्षको सेरोफेरोमारही”संचार क्लव डटकमका संवाददाता तिलकराज विकले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ ।
बुवा देविदत्त गिरी र आमा खासिकला गिरीको कोेखबाट वि.सं २०४३ साल माघ १० गते जुम्ला जिल्लको गुठिचौर गाउँपालिका वडा नं ५ (नेपाल गाउँमा) गिरीको जन्म भएको हो । उनको जन्म मामाको घरमा भएको थियो । उनका बुवाको स्थायी घर भने जुम्लाकै सिन्जा नाराकोटमा हो । तर गिरीका बुवा घर ज्वाई बस्नु भएको थियो । उनको जन्म एक सामान्य कृषक परिवारमा जन्मीएका उनी सानै उमेर देखि मेहनती थिए । उनका बुवा कृषीको समयमा खेती किसानी गर्ने र अन्य समय र हिउँदको समयमा व्यापार गर्थे । जुम्लामा हिउँदको समयमा काम नहुदा, ‘त्यो खाली समयमा लत्ता कपडा गलैइचा बेचेर उनका बुवा परिवारको पालन पोषण गर्थे ।
आमा भने घरका छोराछारीको हेरचाहमा समय बिताउथीन् । बुवाको रोजगार केही थिएन् । त्यो बेला गिरीका बुवा आमामा धेरै तनाव हुनुहुन्थ्यो । अशिक्षित परिवारका कारण उनका बुवा आमाले ८ भाईबहिनी छोराछोरी जन्माए । तर चार भाईबहिनीको स्वर्गवास भयो । त्यो पिडाले अहिले पनि सव परिवारलाई विक्षिप्त बनाएको गिरी सुनाउँछन् । बाँकी चार भाईबहिनी शकुशल छन् ।
पहिलो सन्तान हुन् ‘ गिरी बाल्यकाल बढदै गर्दा, शैक्षिक रुपमा चेतना भएको उनको मामाको घरबाट पनि भान्जलाई पढाउनु पर्छ” भन्ने सोच थियो । मामाकै घरमा बस्थे । गिरीका बुवामा पनि आफु दुःख गरेर भएपनि सन्तानलाई शिक्षादिक्षा दिनुपर्छ, भन्ने चेतना थियो । स्वयम् उनीमा पनि पढ्न रहर उस्तै थियो । उनको पहिलो पढाईको सुरुवात बोडिङ स्कुलबाट सुरु भयो ।
कनिकानिशा बोडिङ स्कुल जुम्लामा गिरी एक कक्षामा भर्ना भए । स्कुल जाँदा करिव डेढ घण्टा हिड्नु पथ्र्यो । बाटोमा स्कुल जादा उनलाई अन्य साथीहरुले कुटपिट गर्थे । त्यो कुटाईबाट बच्नका लागि उनी घरबाट आउदा साथ हजुर आमालाई साथ लगेर जान्थे । बल्ल बचिन्थ्यो । उनले भने,‘जहिले पनि साथमा एक जना घरको ठुलो मान्छे चाहिन्थ्यो । नत्र एक्लै स्कुल जान सक्ने क्षमता थिएन् । बाल्यकालको पीडा सम्झन्छन् गिरी । उनलाई बोडिङको शिक्षा एक कक्षा देखि चार कक्षा सम्म मामाले पढाउनु भयो ।
उनको पढाई मध्यम वर्गको थियो । कक्षा कोठामा अनुशासन र ईमान्दारीता राम्रो सँग बुजेको थिए । विद्यालयमा उनी गुरुहरुका प्रीय थिए । चन्चले स्वभाव, सिर्जनशील प्रगतीशिल भएकोले भोलीका दिनमा केही गर्न सक्छ, भनेर गुरुहरुले माया हौसला दिने गर्थे । गिरीको त्यसपछि, को पढाई सरकारी विद्यालयमा सुरु भयो । त्रिभुवन माध्यामिक विद्यालय झारज्वला जुम्लामै ७ कक्षा भर्ना गरे । त्यहाँ दश कक्षा सम्म पढे । उनी सधै मेहनत र लगनशिल थिए । विद्यालयमा पढाईमा पछाडि कहिले पनि हट्नु परेन । २०५९ सालमा एसएलसी पास भए ।
गिरीको पढाई अगाडि बढ्दै थियो । उच्च माध्यामिक तहको पढाईका लागि बहुमुखी क्याम्पस जुम्लामा भर्ना भए । कक्षा एघार बाह्र गरि उच्च माध्यामिक स्तरको पढाई उत्तीर्ण गरे । २०६२ सालमा पहिलो पटक गिरी एक जिएमडी बोडिङ स्कुलको शिक्षक बन्न पुगे । उनको जागिरको पहिलो तलव तीन हजार रुपैयाँ कामाउन्थे । त्यो पैसाले उनी आफु पढ्ने र घर परिवारलाई सहयोग गर्ने गर्थे ।
भाईबहिनीको पढाई प्रति उनी सधै जासो राख्थे । साथ साथै उनले आफ्नो पढाईलाइ कहिले पनि छोड्न् मानेनन् । गिरीले स्नातकोत्तर स्तरको पढाई जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसबाटै उत्तीर्ण गरे ।
२०६४ सालमा अव मास्टर डिग्री पढ्नका लागि काठमाडौं जाने सोच भयो । जान त्यति सजिलो भने थिएन् । किनकी गिरीको घरमा पैसाको स्रोत नभएको हुदा, बुवाले खेतीकिसान र व्यापार गरेको पैसाले पुगेन । उनको दिमागमा यस्तो सोच आयो कि ? अव म काठमाडौं जसरीनि जान्छु । गएर कतैई बोडिङ स्कुलमा पढाएर आफु पनि पढ्छु । त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाडौंमा मास्टर डिग्री भर्ना गरे । उनले भने,‘आफुले सोचे जस्तो हुदो रहेन् छ । जे सोचेर गएको थिए, त्यो भएन । गिरी भौतारिए पहिला काम गरको मान्छे एक छिन काम नगर्दा नराम्रो लागेको उनी बताउँछन् ।
तर पनि काम खोज्न भने भुलेनन् । अननःत एक दिन शान्ति तथा पुनव्र्यस्थापना मन्त्रालयमा विज्ञापन खुल्यो । त्यो विज्ञापन स्थानीय शान्ति समीतिको अधिकृत पद जुम्ला जिल्लाको लागि थियो । गिरीले आवेदन दिए । उनको नाम निस्कीयो । माघ महिनामा गिरीको पहिलो सिफारिस आफ्नै गृह जिल्ला जुम्लामा भयो । २०६५ साल नेपाल सरकारको अस्थाई करारमा काम गरे । गिरीको अझझन् म स्थाई जागिरमा जाने मनोवल बढिरहयो । उनले जुम्लामा सिफारिस हुदा काठमाडौं बाटनै किताबहरु बोकेर हिनेका थिए । जुम्ला बसेर पनि केही गर्छु उनले भने । जुम्ला बजारमा कार्यालय थियो । उनको घर जान करिव एक घण्टा लाग्थ्यो । तर पढाईको लागि उनी त्यही कार्यालयको हेडक्वार्टरमा बसेर पढे । घरमा गएनन् । तयारी राम्रै गरे । चैत महिनामा विद्यालय निरिक्षकको परिक्षा दिए । नाम निस्कीएन । जेठमा प्राविधिक सायकको परिक्षा दिए । लोकसेवा आयोग सुर्खेतबाट नाम निस्कीयो ।
२०६७ सालको कार्तिक १७ गते नेपाल सरकारको स्थाई नियुक्ति पाए । उनको पहिलो सिफारिस जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोटमा भयो । उनको पद नायव सुब्बा स्तरको थियो । उनको काम दैनिकी निरन्तर रुपमा काममा वित्न थाल्यो । भौगोलिक विकटता जस्तो भए पनि । उनी जुम्लामा जन्मे हुर्केको हुनाले त्यहाँको बसाई सहजै रहयो । उनको कालिकोटमा सम्बन्ध इमान्दारिता निकै राम्रो रह्यो । परिक्षा अनुगमन गर्दा शिक्षा कार्यालको काम अन्तर्गत प्राय सबै वडामा घुम्ने मौका मिल्यो । उनी भन्छन् । करिव चार वर्षसम्म काम गरे । चार वर्ष वितेकै थाहा भएन । गिरीले झन् आफ्नो अधिकृत स्तरको पढाईको तयारी गरिरहेका थिए । उनको सरुवा ७१ सालमा शिक्षा कार्यालय जुम्लामा पुन सरुवा भयो ।
गिरीको विवाह कसरी भयो ? पारिवारिक कुराहरुको चर्चा गरौं ।
उनको सानै उमेरमा विवाह भयो । मात्र उनी १८ बर्षका थिए । घरमा धेरै सन्तान आमाले जन्माउदा आमाको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो थिएन् । उनको विवाह गर्ने उमेर पनि भएको थिएन । गाउँमा सानैमा विवाह गर्ने प्रचलन थियो । तर बाध्यताले बुवा आमाले मागी विवाह गरिदिनु भयो । उनी भन्छन् । विवाह पछि आफुलाई पढ्नका लागि धेरै सहज भयो । र घर व्यवाहार पनि सबै गिरीको श्रीमतिले सम्हालिन । श्रीमति हुन् रामछाया गिरी । उनी भन्छन् मलाई यहाँ सम्म पुर्याउने श्रीमतिको ठुलो भुमिका छ । उनले आफुले बोडिङ पढउदा दुईभाई र एक बहिनीलाई राम्रो सँग पढएका थिए । गिरी भन्छन् मेरा प्रेणाले भाईबहिनीलाई पनि सफल बनाए । गिरीको बहिनी स्थाई सव इन्जिनीयर छिन् त माईला भाई इन्जिनीयर छन् । उनका कान्छा भाई स्थाई जागिर डिभिजन वन कार्यालयमा रेञ्जर छन् । उनका म दाईको प्रेणाले भाईबहिनीलाई जागिरे बनाई सके भन्छन गीरि । अहिले उनका आमा बुवा पनि छोराछोरी सफलता देख्दा खुशि हुनुहुन्छ ।
त्यपछि गिरीले आफ्नो जागिरको पाटो परिवर्तन गर्न खोजे । र प्रशासन सेवा तीर मन लोभियो । आवेदन दिए । २०७२ सालमा अधिकृतमा नाम त निस्कीयो । तर वैकल्पिकमा थियो । गीरिले अध्ययनलाई निरन्तरता दिई राखे । पुन ७४ सालमा अधिकृतमा नाम निस्कीयो । गीरिको प्रशासन तर्फको पहिलो यात्रा थियो । ७५ सालको भदौं ५ गते त्रिरपुरासुन्दरी नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा डोल्पामा पहिलो नियुक्ति भयो । डोल्पामा पनि कार्यालको काम राम्रै रह्यो । उनको सरुवा हुने क्रम जारी नै थियो । बैशास महिनामा जुम्ला तातोपानी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सिफारिस भए । काम गरे सेवा दिए । उनलाई त्यहाँको बसाई र परिवर्तनमा पनि राम्रो भुमिका रहयो । उनको आफ्नै घरबाट काम गर्ने वातावरण बन्यो । त्यति लामो समय बस्ने भएन् । करिव दश महिनामा पछि, बराहताल गाउँपालिका सुर्खेतमा आए । हाल बराहतालकै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । सामान्यतया प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुदा यस्तो हुन्छ । तर अधिकृत गिरी झल्क हेर्दा अधिकृत जस्तै देखिन्छन् । सरल स्वभावका र मिठो बोल्छन् । सबै सेवा ग्रहाई सँग घुल्मिल हुन्छन् । आम सेवाग्रहाई लोकप्रिय मानेका छन् ।
कार्याललाई घर जस्तै सम्झन्छु । कर्मचारी साथीहरुलाई परिवारको रुपमा हेरेको छु । जानको कुरा सिकाउछु । उनी भन्छन् विकासमा राजनीतिकरण गरिनु हुदैन् । कर्माचारी, राजनीतिज्ञ, आमसंचार माध्यम र जनता सबै मिलेर देश बनाउन जरुरी देखिन्छ । संघीयता पश्चात कर्माचारीमा केहि नैरश्यता छाएको छ । तर त्यसलाई पनि राज्यले गम्भिरतापुर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
राज्यले कसलाई कुन स्थानमा राख्ने हो सोचविचार गर्नु राम्रो होला । र पदमा रहेका कर्मचारीले पनि देश र जनताको भलो चितायर काम गर्नु पर्छ । म आज जुन ठाउँमा आएको छु, त्यो मेरो मेहनत हो, अधिकृत गिरीको भनाई छ, मेरो मेहनतलाई राज्यले विश्वास गरेको छ । त्यसलाई मैले पुरा गर्नुपर्छ । उनी सुनाउछँन निजामती कर्मचारी हुनुको छुटै आन्नद छ । समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक छ । यो एउटा ईज्जत देशराष्ट्रको हितको लागि हो । मलाई समाजले स्वाईकार गर्छ । सरकार चलाउन र नियम कानुन पालन गराउने निजामती सेवा नै हो । यसमा गिरीको स्पष्ट विचार छ जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले ईमान्दारीता मेलमिलाप हुनुपर्छ । यसो भए मात्र आम नेपाली हाम्रो सपना पुरा हुन्छ । देशले काचुली फर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरी बताउछँन् ।